Matipi uye manomano ekuti uwane zvakanyanya kubva paSpotify | IPhone nhau
Matipi uye manomano ekuti uwane zvakanyanya kubva paSpotify
Miguel Hernandez | | IPhone maapplication
Spotify ndiyo inonyanya kufarirwa mimhanzi yekushambadzira pamusika, ichokwadi chisingarambike, kunyangwe hazvo basa idzva rakabuda rinenge gore rapfuura iro rakamira pariri, uye pahwaro hwakanaka, tinozvidaidza sezvazviri haigone kubva kune imwe nzira kuenda kuApple Music. Zvisinei, Spotify haina kumira kukura. Inoenderera isingamisike mushure mekupfuura chinodzivisa chemamirioni makumi matatu ekubhadhara vashandisi, uye chokwadi ndechekuti pane zvimwe uye zvimwe zvingasarudzwa uye zvakavanzika pakati pekushandisa kwazvo. Saka, Tinoda kukuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezveSpotify ye iPhone uye nezvakawanda.
Nekuda kweizvozvo, haigone kuve yakaderera pane muActualidad iPhone isu takaongorora mikana iyo Spotify inotipa, mimhanzi yekushambadzira sevhisi yepamusoro. Munguva pfupi yapfuura takaona kuti Spotify yanga ichiita shanduko yakakosha kune vashandisi vayo, uye ndizvozvo yakadzikisa mutengo wehurongwa hwemhuri kuenderana neiyo Apple Music, yakachipa pamusika, nekudaro, kusvika Vashandisi vatanhatu vanogona kushandisa Spotify Premium ye € 14,99 chete, chipo chisingakundike, icho chinoenzana nemitengo neApple Music, zvingaite sei neimwe nzira, uye izvo pasina mubvunzo zvichabatsira vazhinji vashandisi uye zvichaita kuti zvifadze vashandisi vazhinji kusaina kunyorera.
Tichakuudza zvimwe nezve Spotify, izvo pamwe iwe unofanirwa kuziva, uye zvichakubatsira iwe kuvandudza ruzivo rwako neSpotify, kuwana zvakazara mazviri.
1 Maitiro ekuti uwane Spotify Premium Yemahara
2 Tricks yeSpotify
3 Dhawunirodha Spotify ye iPhone
Maitiro ekuti uwane Spotify Premium Yemahara
Chokwadi ndechekuti parizvino mukana uyu unenge usingakwanise. Munguva yakapfuura, taigona kuwana Spotify Premium yemahara neyakareruka, isu taingofanirwa kushandisa maakaundi matsva kutora mukana wemwedzi wekuyedza weSpotify Premium. Nekudaro, Spotify yakagonesa system yekudzora, kuisa miganho pane vanokanganisa, uye ikozvino makadhi echikwereti akafanana ne «zvakabatana»Kuakaundi account, saka haugone kugadzira akati wandei maSpotify maakaundi aine kadhi rechikwereti rakafanana, mubhadharo haugone kushanda uye hauzove Premium.
Kune rimwe divi, parizvino (Chivabvu 2016), Spotify's 30-day trial time is not even available, pari zvino, mukana ndewekutenga Spotify Premium kunyorera iyo Izvo zvichatibvumidza chete € 0,99 (mushure me € 9,99) kunakidzwa nemwedzi mitatu yeSpotify Premium. Nekudaro, kune dzimwe nzira dzinoverengeka padanho reJailberak, dzisingabvumidze ese ePrimum mashandiro eSpotify, asi mazhinji acho. Kunyangwe kubva kuActualidad iPhone isu hatizive zvechokwadi kuti inoshanda sei, uye hatidi kubatana nemhando iyi yenzira. Nekudaro, nzira iri nyore yekutora Spotify Premium, ndeye kutora mukana wemwedzi mitatu ye3 inopihwa kusvika Nyamavhuvhu, uyezve, kutsvaga shamwari shanu kana hama dzinoda kugadzira Spotify Mhuri account, kuti vakwanise kupatsanura € 0,99 mubhadharo wechitanhatu, mutengo unosetsa kana isu tichifunga izvo zvinopihwa Spotify Premium.
Uri wekutanga mushandisi? Tora mukana wepamusoro soro mhando. Vazhinji havazvizive, asi Spotify ine odhiyo yemhando yekusarudza sisitimu yekubhadhara vashandisi. Nekudaro, vashandisi vePrimiyamu vanozokwanisa kuchinjisa hunhu mariri marira. Tine "Otomatiki," "zvakajairika," "kumusoro," uye "zvakanyanyisa." Tinokurudzira kuti kana uchizotora runyorwa rwako rwaunofarira kuti urushandise kunze kwenyika, unorutora mumhando yakanyanyisa, ichokwadi kuti ichatora imwe nzvimbo, asi nzeve dzako dzinokutenda. Kune rimwe divi, kukwirira kwehunhu, kukwirisa kwedata .
Dhawunirodha mimhanzi kuti uteerere kunze kwenyika: Chikonzero chikuru chinounza pfungwa dzese kuSpotify Premium, nekuda kwekunyoreswa kwakabhadharwa tinokwanisa kurodha mimhanzi yedu yatinofarira kuti tiuteerere pamhepo nekunze. Muchokwadi, ndicho chete chikonzero chandinobhadharira Spotify. Vazhinji uye vazhinji vashandisi vanosarudza kushandura nharembozha yedu kuti ive yedu mota multimedia centre, uye zvinonakidza kugona kuteerera kune ako ese akatorwa nziyo chero kupi, uine kana usina kufukidzwa, uye pamhando yepamusoro. Patinogadzira runyorwa, musoro wenyaya unoonekwa pazasi unoverengwa «inowanikwa kunze kwenyika«Kana isu tikamisa switch, kurodha pasi kunotanga. Kana isu tikapinda rondedzero, kana yakamonyorwa nemuseve wekurodha museve, zvinoreva kuti tinogona kuinzwa isingaenderane uye ichachengetedza data nebhatiri.
Wakanganwa here zvawakanzwa nezuro? Usatombo kunetseka, Spotify ine nhoroondo: Ndizvozvo, iwe unogona kutora mukana weiyo nhoroondo, sezvazvinoitika mumabhurawuza, Spotify ine nhoroondo yezvose zvatakanzwa. Parizvino, chimiro ichi chinongowanikwa chete kune mutengi weWindows uye macOS. Kuti tiuwane, tinofanira kuenda «tamba mutsara«, Pazasi peiyo« dzokorora »uye« bhatani »bhatani, inomiririrwa nemitsara mitatu yakatwasuka. Ipapo mutambo wekutamba uchavhurwa, uye kurudyi ndiyo nhoroondo.
Tora mukana wepo mukana wekudzora akasiyana madhijitari: Spotify yakanyatsobatana, ndizvozvo, kana iwe ukangotanga Spotify pane mudziyo, unogona kuzvidzora kubva kune chero emamwe mafoni ako akabatana pane imwechete network uye neakaundi imwechete. Saka, semuenzaniso, tinogona kutora mukana weApple TV yedu kana iyo PS4, kuibatidza uye kuisa stereo yedu kumba kuzere kugona. Zvisinei, tingave tiri mukicheni tichigadzira kudya kwemanheru. Hapana dambudziko, kana ukatanga Spotify kubva kuiyo iPhone, inokuzivisa iwe kuti irikutamba pane imwe kifaa, ichakupa sarudzo yekutamba pane chishandiso chawatanga, kana kudzora chishandiso icho chiri kutotamba. Zita richaonekwa riri girinhi, pazasi peanodzora
Wakadzima playlist nekukanganisa here? Usanetseke, unogona kuzvidzorera. Aya Spotify anofunga nezvese zvinhu. Iwe wapedza mwedzi uchigadzirira rakakwana runyorwa, uye iwe ukangozvidzima. Usazvidya moyo, unogona kuzvidzorera pasina kutambura kwakanyanya. Kana isu tikapinda yedu Spotify account kubva kune yako webhusaiti iwe unogona kupfuura pamusoro pe "Subscription" sarudzo, sarudza mukana wekuwanazve playlists ", runyorwa rwekupedzisira rwawakabvisa rucharongedzwa maererano nenguva, uye iwe unozokwanisa kudzoreredza.
Iva Mambo wekaraoke nekutenda kuna Spotify: Vazhinji havazvizive, asi Spotify ine "karaoke" modhi, nekuda kwebasa rakapihwa neMusixmatch. Kana iwe ukatarisa kune Mac kana Windows mutengi, kungo kurudyi kwetambo yenguva, tinowana sarudzo «TSAMBA«, Kana tikadzvanya pairi, ichatanga mhando yekaraoke modhi iyo ichatibvumidza kuti tione mazwi enziyo nenziyo zvakanyatsoenderana. Iyo nzira iri nyore yekusimudzira manheru ako nekuda kweSpotify, iwe unongoda waini shoma uye maikorofoni kuti uikanganise.
Dhawunirodha Spotify ye iPhone
Zvino kunouya chikamu chiri nyore chekeke, tora Spotify ye iPhone. Semazuva ese, iyo yakachengeteka uye inoshanda zvakanyanya ndiyo iOS App Store, yemahara zvachose tinogona kudhawunirodha Spotify ye iPhoneKana isu tichida kutora mukana wayo wePrimiyamu mabasa, tinogona kuwana kunyoreswa kubva pairi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Matipi uye manomano ekuti uwane zvakanyanya kubva paSpotify
Ōiō Rōċą akadaro
tsime ... ndakafa ndakamirira matoyi ... iwo matipi akareruka anoziva mushandisi wenguva dzose ... vaba maminetsi matatu ehupenyu hwangu husina basa
Pindura kuna ōiō Rōċą
Miguel Hernandez akadaro
Ndine urombo, ndinovimba munogona kuvadzosa rimwe zuva. Ndine chikwereti chako 😉
Kwazisa shamwari, ndatenda nekuverenga.
Pindura Miguel Hernández
Jannie Espinosa akadaro
Inzira yakadii yekuzviratidza! Iyi nyaya yese ndeyekuzviisa pasi, chokwadi chekuti chakaratidzika kunge chiri pachena kwauri hazvireve kuti iwo mafungiro evamwe vashandisi. Dzidza kupa kushoropodza kunovaka, panzvimbo pemafungiro asina basa, nekuti kutaura kwako uku kwaive kupedza nguva uye ndakaiverenga ndichifunga kuti yaizove neruzivo!
Pindura kuna Jannie Espinosa
Mhoro zvakanaka, kana ini ndatova neakaunzi account kuti ndive nhengo yemhuri, ndinobhadhariswa mutsauko kana zvakare iyo € 15
Kwete, iwe unobhadhariswa mwedzi unotevera.
Spark Ku akadaro
Iyo mhuri account ye $ 150.00 pesos pamwedzi, ndeye chete kwemwedzi mitanhatu?
Pindura Spark Ku
Donhedza Flip, uchiisa bhora mumugomo wako muapp yevhiki
LG Innotek inogona kunge iri yega mutengesi weiyo iPhone 7 Plus mbiri kamera lenzi